मासिक लाखौं बहाल उठाउने गुठी नै भाडाको घरमा – indepth.com.np
मासिक लाखौं बहाल उठाउने गुठी नै भाडाको घरमा
BUSINESS SPECIAL TOURISM
सूर्यविनायक नगरपालिका ६ सूर्यविनायकस्थित निजी घरमा रहेको भक्तपुर गुठी कार्यालय । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय भक्तपुरले घरपसलको बहालमात्रै मासिक करिब ३६ लाख रुपैयाँ उठाउँछ । उसले भक्तपुर नगरभित्रका १४ वटा घर तथा पसल बहालमा लगाउँदै आएको छ ।
मासिक ३६ लाख रुपैयाँ बहाल आउने घर तथा पसल भएको भक्तपुर गुठीले आफ्नै कार्यालय भने बहालको घरमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । वि.स. २०४८ सालदेखि भक्तपुर गुठीले निजी घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको हो । भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा सार्दै सार्दै आएको गुठी कार्यालय विगत पाँच वर्षदेखि सूर्यविनायक नगरपालिका ६ सूर्यविनायकस्थित एक निजी घरमा रहेको छ ।
मासिक २६ हजार रुपैयाँ तिरेर उक्त घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
उक्त घरको दुई तला गुठीले कार्यालयको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
भक्तपुर गुठीका अधिकांश घर तथा पसलमा पर्यटकीय रेस्टुरेन्ट तथा पसलहरु सञ्चालित छन् । दुइटा मठमा पुरातत्व विभागले राष्ट्रिय कला संग्रहालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । दत्तात्रय क्षेत्रमा रहेको पुजारी मठमा काष्ठकला र चिकंफले मठमा धातुकलाको संग्रहालय सञ्चालन हुँदै आएको हो ।
पुरातत्वले दिएन बहाल
२०४१ सालमा पुरातत्व र गुठीबीच पाँच वर्षे सम्झौता भएर ती दुई मठमा संग्रहालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सम्झौतो सकिएको ३० वर्ष हुँदा पनि नवीकरण भने भएको छैन तर दुवै मठमा अहिलेसम्म संग्रहालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्यसबेलै मासिक ३२ हजार रुपैयाँ बहाल दिने गरी प्रयोग गरिएको दुई मठको हालसम्म एक रुपैयाँ पनि बहाल प्राप्त नभएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘मासिक ३२ हजार रुपैयाँ घर बहाल तिर्ने गरी पुरातत्व विभागसँग २०४१ साल साउनदेखि २०४६ असार मसान्तसम्मको सम्झौता भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरण केही भएको छैन । न सम्झौताबमोजिम बहाल पाइयो न त मठ नै प्रयोग गर्न छाडिएको छ ।’
उनले पुरातत्वसँग यस विषयमा धेरैपटक छलफल भए पनि केही समाधान हुन नसकेको सुनाए ।
एउटै मठको मासिक बहाल साढे २७ लाख
दत्तात्रय क्षेत्रस्थित जंगम मठ पाटीबाट भक्तपुर गुठीले बढी बहाल उठाउँछ । उक्त मठ पाटीमा सञ्चालित न्यू क्याफे डी पिककले महिनामा २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घरबहाल गुठीलाई बुझाउँछ । दुईतले जंगम मठ पाटी ६ आना २ दाम क्षेत्रफलमा बनेको छ ।
त्यस्तै टौमढी क्षेत्रस्थित ऐसामढी सत्तलमा सञ्चालित क्याफे न्यातापोलले मासिक पाँच लाख ५५ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ बहाल बुझाउँछ । दुई आना तीन पैसाको क्षेत्रफलमा तीनतले ऐसामढी सत्तल बनेको छ ।
भक्तपुर गुठीले पाँचतले मन्दिरको उत्तरपट्टि रहेको सिद्धि लक्ष्मी फूलबारीबाट मासिक ७७ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ बहाल उठाउँछ । पाँचतले मन्दिरकी शक्ति देवी सिद्धिलक्ष्मीको दैनिक पूजाआजालगायतको लागि आवश्यक फूलको लागि ११ आना एक पैसा तीन दामको फूलबारी व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिस्का जात्राको प्रमुख आकर्षण भैरवनाथ तथा भद्रकालीको रथका सामान राख्ने सत्तलसहितको उक्त फूलबारीमा हाल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदै आएको छ । गुठीले टौमढी क्षेत्रकै भद्रकाली पाटी मासिक २३ हजार चार सय रुपैयाँमा बहालमा लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै क्वाछें कुमारी द्योछें र आकाशभैरव नौबाजा भजन घर क्रमशः मासिक २१ हजार दुई सय चार रुपैयाँ र ३१ हजारमा बहालमा दिइँदै आएको छ ।
दत्तात्रयस्थित चिकंफले मठको भुई तला मासिक २२ हजार दुई सय २२ रुपैयाँमा बहालमा लगाइएको छ । मासिक ३० हजार एकसय ११ रुपैयाँमा दत्तात्रयकै गोदावरी मठ र मासिक २१ हजार दुई सय चार रुपैयाँमा भीमसेन पाटी बहालमा दिइएको छ ।
भवनको नक्सा तयार
प्रमुख सुवेदीले भक्तपुर गुठीको आफ्नै भवन बनाउन नक्सा तयार गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नक्सापासको लागि भक्तपुर नगरपालिकामा पेस गरिएको छ ।
२०४८ अगाडिसम्म भक्तपुर दरबार क्षेत्रमै गुठीको आफ्नै भवन थियो । आठ आना क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गामा बनेकै भवनमा गुठीको कार्यालय रहेको थियो । २०४५ सालको भूकम्पले भवनमा क्षति पु¥यायो । भूकम्पले क्षति पु¥याएको भवन २०४८ सालमा जगैसम्म भत्काइयो ।
‘भवन पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला जगैसम्म भत्काइयो’, कार्यालय प्रमुख सुवेदीले भने, ‘तर भवन बनाउन सकिएन ।’
बहालमा लगाएको अधिकांश घर तथा पसल कार्यालय सञ्चालन गर्न अपुग रहेको प्रमुख सुवेदी जिकिर गर्छन् । त्यसैले कार्यालय निजी घरमा बहालमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
उनले भक्तपुर नपाबाट नक्सापास भएलगत्तै भवन बनाउने तयारीमा कार्यालय रहेको जानकारी दिए । तर भक्तपुर नपाले सम्पदा क्षेत्रको मापदण्डविपरीत नक्सा बनाएकाले तत्काल पास गर्न नसकिने जनाएको छ । नपाको नक्सा शाखा प्रमुख इञ्जिनियर ओमहरि थाका अनुसार भक्तपुर दरबार क्षेत्रलगायत सम्पदा क्षेत्रमा ३५ फिटभन्दा अग्लो घर तथा भवन बनाउन पाइँदैन तर गुठीले त्यसभन्दा अग्लो घरको नक्सा पेस गरेको थियो ।
त्यसमाथि गुठी भवनसमेत ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले पुरानै स्वरुपमा साविक बमोजिम भवन बनाउनुपर्ने नपाको जोड रहेको उनले सुनाए ।
गुठीले भवन नबनाउँदा २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पअघिसँगै खाली रहेको जग्गामा अहिले स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयले अस्थायी संरचना बनाएर सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री भण्डारण गर्दै आएको छ ।
भक्तपुरमा चार हजार भूकम्प पीडितले लिएनन् निजी आवास अनुदान
भक्तपुरमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वीमिङ पुल सञ्चालन
गाईजात्राको इतिहासमै पहिलोपटक गुञ्जिएन गिनी ट्वाङ
आज सा पारु अर्थात गाईजात्रा
फसी देगमा कमसल ढुंगाको थाम
फसी देगभित्र अन्यत्रकै दक्षिणामूर्ति प्रतिस्थापन
विजेन्द्रले नवदुर्गालाई चढाए ९० हजारको ‘खःमेय्’
भक्तपुरमा गायक स्व. थापाको स्मरण